Noma yimuphi ukuhweba ihilela Ukubambisana eduze ne amafemu ukunikezela ezokuthutha. Kungakhathaliseki ukuthi yilona kwezidingo express phakathi komuzi noma izinto zokuhamba kwelinye izwe. Njengoba yaziwa, Kazakhstan iyona enkulu kunazo zonke shopping centre, ngenkathi isikhungo eziningi zokuhweba amafemu.
Sibonga i olunzulu futhi kahle uhlelo ezokuthutha izindiza ukuba sithwale izimpahla ezivela Kazakhstan eRussia kungaba ngempela fast. Kazakhstan suka amathani yansuku zonke izimpahla, okuyinto ziphuthunyiswe imizi ehlukahlukene kanye nezifunda. Sizobheka amathuba nezindlela zokuthutha.
Indlela ejwayeleke kakhulu ukuthutha izimoto. On nezinyamazane ezincane nezinqola jikelele ingathwala ezahlukene cargo amavolumu. amaloli amaningi anemisila amadivaysi ekhethekile evumela ukuthutha izimpahla zonke izinhlobo nokwenziwa kwayo. Uyini ekhangayo imodi enjalo yezokuthutha? Okokuqala, kungenxa ijubane maneuverability. Van isethwe ukuya nganoma yisiphi isikhathi, ngesikhathi esifanayo, uma kukhona ubunzima endleleni (isiminyaminya, izingozi noma enkulu iqhwa emigodini), ungakwazi cishe njalo ephumayo, akunakwenzeka ukuba sifeze, ezifana elinye lawo esitimeleni. Okwesibili, izindleko ongaphakeme yezokuthutha, eye kwamlethela amakhasimende amaningi.
Inethiwekhi ujantshi ngempela athuthukiswe ukuthwala izimpahla ezivela Kazakhstan kungenzeka hhayi kuphela e-Russia kodwa nakwezinye izifunda. Sesitimela, ujantshi ukuthutha noma umane bayindlala kakhulu. Kulokhu, nakho kufeza okukhulu indima ngenani eliphansi ngezinto zokuhamba.
Lokho ukulethwa ujantshi ingenye yezindlela inzuzo kakhulu futhi elula yokuhamba. Okokuqala, ezokuthutha ngojantshi kwenza kube nokwenzeka kahle ukuletha izimpahla kusukela ibanga eduze futhi eside. Olubanzi ujantshi inethiwekhi ikuvumela ukuba ukuthutha izimpahla ezihlukahlukene izindlela, ngaphandle asebenzise ezokuthutha ezengeziwe. Okwesibili, ukulethwa isitimela kuyinto engabizi, ikakhulukazi wezimpahla groupage. Futhi okwesithathu, ezinqoleni wesitimela okuthwala izinhlobo ezahlukene impahla emikhunjini kwanoma iyiphi amavolumu. Ukuze lezimpahla ngamunye has umbono ayo stock kweqa, ogama design ivumela ukuphepha esiphezulu ukuthutha wezimpahla ikakhulukazi ngesikhathi esifanayo is kunakwe futhi indlela yokulayisha athula.
Rail nempahla ethandwa e izinkampani eziningi, ngenxa yizinhlobonhlobo kanye nezimo ukuze zonke izinhlobo wezimpahla, zingabantu ngokufuna amakhasimende amaningi.
Namakalishi wenza ukuthumela impahla emikhunjini kwanoma iyiphi amavolumu ukuthi ziwusizo kakhulu, ngokwesibonelo, ngesikhathi ezokuthutha imishini ezinkulu noma imishini. izinhlobo ezahlukene namakalishi ingashintshwa ukuze baphathe izinhlobo ezahlukene imoto. Ungakwazi uyiswe ngesitimela futhi ngobuningi uketshezi, izimpahla jikelele, izinto zokwakha, ukhuni ngisho nezilwane. Uma umkhiqizo kuthatha isikhala okuncane, kuyobe sekuba i-ezifanelekile ukuthuthwa impahla emikhunjini, sikuvumela ikhasimende, futhi umculi.
Ukuze afeze izimpahla ezivela Kazakhstan eRussia kungenzeka futhi esebenzisa umoya ezokuthutha. Uma Kuyaphuthuma ukuletha izimpahla noma izimpahla kuyinto yinzuzo, kufanele usebenzise indiza.
Ngamunye indlela ukulethwa ewusizo ngendlela yalo. Ezokuthutha Kufanele kukhethwe esekelwe ukwakheka kanye umthamo wezimpahla. Kuyadingeka ukuba banake ijubane futhi izindleko kwezidingo.